Dowlado loogu baaqay inay Diyaarado ku soo xoojiyaan Hawlgalka AMISOM. – Radio Dalsan FM 91.5 MHz | Warar Sugan | Somalia News
Dowlado loogu baaqay inay Diyaarado ku soo xoojiyaan Hawlgalka AMISOM.
Hadal qoraal oo ka soo baxay Ururka Midowga Afrika ayaa loogu baaqay Dowladaha Kenya, Ethiopia iyo Uganda oo ay ciiddama ka joogaan Somalia inay soo daabulaan Diyaaradaha Dagaalka, si ay Ciiddanka AMISOM uga taageeraan Dagaalka ay kula jiraan Xarakadda Alshabaab.
Saddexdaasi Dowladood ayaa lagu tirtirsiiyey inay ka dhabeeyaan Ballan-qaadkoodii ahaa inay Diyaarado ku soo kordhin doonaan Hawlgalka AMISOM.
Qoraalka waxaa kaloo lagu sheegay inay Alshabaab weli khatar ku yihiin Nabadda, Ammaanka iyo Deganaanshaha Somalia.
Baaqan ayaa ku soo beegmay, iyadoo ay Ciiddanka AMISOM kordhiyeen hawlgalladda ay ku qaadayaan Deegaanadda ay Alshabaab kaga sugan yihiin Goballadda Sh/hoose iyo Sh/dhexe, iyadoo ay Diyaaradaha Dagaalka iyo kuwa Droneska ee Maraykanka isbuucii hore ka qeyb galeen Iska-horimaad Ciiddanka Uganda ee qeybta ka ah AMISOM iyo Dagaalamayaasha Alshabaab ku dhex maray Deegaanka Sabiib oo 10-KM u jirta Degmadda Afgooye.
Dhinaca kale, Hadal-qoraal oo ay AMISOM soo dhigtay Twitterkeeda ayey ku sheegtay inay iyagoo kaashanayo Dowladda Federalka somalia inay sii wadi doonaan sidii ay uga guuleysan lahaayeen Alshabaab iyo inay dadka Soomaalida ku naaloodaan Nabad iyo Ammaan, waa sida hadalka loo dhigay.
AMISOM iyo Alshabaab waxa uu dagaal aan lagu kala bixin dhex marayey tan iyo sannadkii 2007-dii, inkastoo Alshabaab laga saaray inta badan magaallooyinka ugu waa weyn Somalia.
Hawlgalka AMISOM oo xilliga loo kordhiyey
FAALLO: 73-guuradii ka soo wareegtay Asaaskii Ururka SYL oo ku soo beegantay Mustaqbal la’aan haysata Dhallinyarada Soomaaliyeed.